Satechi inotsigira iPad, yakakosha | IPhone nhau
Iyo iPad iri kuramba ichiwedzera kubatsira pane desktop yedu nekuda kwezvinhu zvitsva izvo Apple zvinosanganisira muPadOS, uye nekuti iyi rutsigiro rwakanaka souyu anobva kuSatechi rwakakosha iyo inosanganisa dhizaini uye mashandiro.
Iyo iPad, mune yangu iyo iPad Pro, yave chishandiso changu chakakwana chekufamba, asi zvishoma nezvishoma iri kuwanawo nzvimbo pandinenge ndiri kumba kwedhesiki rangu, zvese kudya zvemultimedia zvemukati uye kundibatsira mubasa rangu nekombuta . Uye izvo zvirinani chaizvo kushandisa yakatarwa sitendi iyo inoisimudza uye inokutendera iwe kugadzirisa iyo yekurerekera kona kupfuura zvinoita Mashiripiti Khibhodi. Zvese izvi uye zvimwe zvakawanda ndizvo zvaunogona kuita neiyi aluminium yakamira kubva kuSatechi.
Yakagadzirwa zvachose yealuminium, kunzwa kunze kwebhokisi hakugone kuve nani. Icho chinotonhora, chakasimba, chinorema kubata ... hunhu hwayo hwekuvaka hwakanyanya kwazvo, uye izere nezvinhu zvidiki zvinoratidza kuti zvinhu zvakawanda zvakafungidzirwa pakuzvigadzira. Chinhu chekutanga chinomira kunze ndeye, asi chakanyanya kukwirisa (chinenge hafu yekirogiramu), pachishandiswa chigadziko. Kurema uku kunobatsira kudzikama kwesitendi, iyo inobvumidza iwe kuisa iyo iPhone mune chero chinodiwa chinzvimbo pasina kufambisa millimeter rimwe chete.. Hinji mbiri dzechigadziko dzinokutendera iwe kukwidza kana kudzikisa seti, uye kugadzirisa kona yekutenderera kweiyo iPad, ichipa chinenge chikamu chakazara chekufamba: chinzvimbo chepamusoro chekuona zvemultimedia zvemukati, kana chaizvo padhesiki danho kuti ugone nyora neApple Penzura.
Ini ndakambotaura pamusoro pezvinhu zvinovandudza rutsigiro. Kutanga tinowana nzvimbo dzinoverengeka dzakafukidzwa nesoft silicone yekudzivirira pamusoro peiyo iPad yedu kana tichiiisa pane rutsigiro. Iyo yakafukidzwawo neichi chinhu pazasi payo, kuchengetedza nzvimbo yatinoisa, uye kuigadzirisa kuti irege kutsvedza pairi. Uye isu zvakare tine maburi maviri atinogona kupfuura nawo tambo yekuchaja, zvichitibvumidza kuti tiwedzere rechangu iPad zvese zvakatwasuka uye zvichidzika, pasina kana nediki dambudziko.
Paunenge uchiisa iyo iPad pachigadziko, kunzwa kwekuchengeteka kwakanyanya kwazvo. Hinji dzinosimba zvakakwana zvekuti kana iwe ukaisa chinzvimbo chaunoda, hachifambise hafu yemamilimita. Muchokwadi, kana iwe uchigona kuisa dambudziko pane rutsigiro, ndezvekuti dzimwe nguva unoda maoko ese maviri kuti ugone kuzviburitsa. Ini ndinoda izvi kuti ndive nekunonoka kana kupa nzira zvishoma nezvishoma ... kwandiri, sarudzo yakaitwa naSatechi mune izvi ndiyo chaiyo.
iyo stand inobvumidza iwe chinzvimbo chekushandisa kwakasiyana kwazvo. Izvo zvakanaka kuti unakirwe nemultimedia zvemukati, asi zvakare zvinotendera isai padhuze neyako huru yekutarisa kuti ushandise iyo Sidecar basa ne macOS, iyo inoshandura yako iPad kuita yechipiri yekutarisa, nezvose zvakanakira izvi zvinosanganisira. Uye ini ndinowana chinzvimbo chepasipasi chakanyatsogadzikana kugona kunyora kana kudhirowa neApple Penzura. Uye kana iwe uchida kushandisa yekunze keyboard uye mbeva, kuve neako iPad pane ino kumira kunokutendera iwe kuiisa munzvimbo yakanakisa nzvimbo yekushanda nayo.
Kugadzikana kweSatechi aluminium stand inobvumidza kuti ishandiswe munzira dzakawanda: nekhibhodi yekunze nembeva, kunyora neApple Penzura, kunakidzwa nemultimedia zvemukati, kana kuishandisa seyakatarisa yekutarisa kuMac yako nekutenda kuSidecar. Wedzera kune iro rakanakisa rekuvaka mhando uye kugadzikana kunoshamisa zvechokwadi, mhedzisiro chinhu chinowanikwa nechero chero mushandisi wePad yaizoda padhesiki ravo. Mutengo wacho ndeye € 55 paAmazon (link)
Yakatumirwa pa: 26 April 2021
Kugadziridza kwekupedzisira: 25 April 2021
Kugadzikana mune chero chinzvimbo
Anogara panzvimbo yakatarwa
Hinge kufamba zvishoma zvakaoma
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » iPad Pro » Satechi kumira kwePad, kwakakosha
Iyo Spotify kunyorera sevhisi haizochengete chero komisheni